[APK] Playerunknown ၏ Battlegrounds ကိုယခု download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ Androidsis
[APK] Playerunknown ၏ Battlegrounds ကိုယခု download နှင့် install လုပ်ပါ။ (OBB method)
Francisco Ruiz | | APK, Android ဂိမ်းများ, လဲ tutorial
Android အတွက်တရား ၀ င်ဂိမ်းတစ်ခုထွက်ခွာမည်ကိုမျှော်လင့်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ဤကိစ္စတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် Android အတွက် Playerunknown ၏စစ်မြေပြင် ၎င်းမှာ Google Play Store မှနယ်မြေအများစုအတွက်မရရှိနိုင်ပါ Androidsis ငါတို့သည်သင်တို့ APK နှင့်အတူပေးသွားမှာပါ အဖြစ်ရှင်းပြပါ ယခုအချိန်တွင်အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်း၏ installation နည်းလမ်း လူတိုင်းအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုရှင်းပြရှင်းပြအပြင် Playerunknown ၏ Battlegrounds ဂိမ်း၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သော apk plus ဒေတာဖိုင်ကို download လုပ်ပါ, ငါကတစ် ဦး ချင်းစီ၏ installation ကိုနည်းလမ်းကိုတစ် ဦး ချင်းစီရှင်းပြအဖြစ် Android အတွက်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သေနတ်ကိုင်သို့မဟုတ်ရှင်သန်မှုဂိမ်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
1 Playerunknown ရဲ့ Android အတွက် Battlegrounds, လူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကဂိမ်း
2 Android အတွက် Playerunknown ၏ Battlegrounds ကို download လုပ်ပါ
3 Playerunknown ၏ Battlegrounds များကိုတစ်ဆင့်ချင်း install လုပ်နည်း
Playerunknown ရဲ့ Android အတွက် Battlegrounds, လူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကဂိမ်း
Playerunknown ၏ Battlegrounds သည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်သေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့ကငါတို့ဝတ်ထားတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်၊ ဝတ်ထားတာနဲ့အတူကျွန်တော်ဟာအဝတ်အစားတွေကိုသာဆိုလိုတာ၊ တကယ့်အချိန်ကကစားသမားတွေအများကြီးရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာ။
ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုရှာဖွေရန်၊ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊ စသည်တို့စသဖြင့်ရှင်သန်ရန်အခြေခံများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့အားဖမ်းဆီးရန်ကြိုးစားသည့်လက်နက်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းဂိမ်း၏အခြားပါ ၀ င်သူများသို့မဟုတ်ကစားသမားများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။.
ဒီဂိမ်းထဲမှာမတူညီတဲ့ Modes သုံးမျိုးပါဝင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းပါ ၀ င်မည့်ဂိမ်း mode နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဂိမ်းပုံစံနှစ်ခုရှိသည် ၎င်းအနေဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လက်တွဲဖော်တစ် ဦး နှင့်လက်တွဲကစားနိုင်ပြီးဒုတိယတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည့်အခြားကစားသမား ၅ ဦး နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါမနေ့ကမှမသိခဲ့ပေမယ့်ငါကြိုးစားခဲ့အဖြစ်ငါက၎င်း၏ကြီးမားတဲ့အရည်အသွေး, ၎င်း၏အထင်ကြီးဂရပ်ဖစ်, သမိုင်းနှင့်ဂိမ်းကစားနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့အသိအမှတ်ပြုသောဂိမ်း Android အတွက်ရှင်သန်နိုင်သည့်သေနတ်ပစ်ဂိမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်.
Android အတွက် Playerunknown ၏ Battlegrounds ကို download လုပ်ပါ
သငျသညျလိုလျှင် Play Store တွင်တရားဝင်မရရှိနိုင်မီဤဂိမ်းကြီးကိုပျော်မွေ့ပါသင်ရုံမှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိသည် ကြေးနန်းအပေါ် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း အတွက် ဂိမ်းအချက်အလက်များ၏ apk နှင့် obb ဖိုင်ကို download လုပ်ပါဂိမ်းသည်စနစ်တကျလည်ပတ်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အတွက်အဆုံးစွန်သည်အရေးကြီးသည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာ၊ ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်နှင့်, ငါ apk နှင့်ဂိမ်းဒေတာကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မှန်ထားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်သော်လည်း ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်စက္ကန့်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းဖြတ်သန်းသွားရန်အကြံပြုပါသည် ၎င်းကိုအလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာကူးယူနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။
Playerunknown ၏ Battlegrounds များကိုတစ်ဆင့်ချင်း install လုပ်နည်း
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်စွန့်ခွာခဲ့တဲ့ပူးတွဲပါဗီဒီယိုမှာ Playerunknown ရဲ့ Android အတွက် Battlegrounds တွေကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြထားပါတယ်။ apk ကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ကန့်သတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လိုအပ်သောဒေတာပါရှိသည်။ apk ထည့်သွင်းမှုကိုမလုပ်ဆောင်မီ ZIP ဖိုင်ကိုအရင် zip ဖြည်ပြီးရရှိသော folder ကိုလမ်းကြောင်း / android / obb တွင်ကူးယူပါ။.
ထိုအခါသင်မသိသောအရင်းအမြစ်များမှ applications များထည့်သွင်းရန်ထို option ကိုသာ enable လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ဂိမ်း၏မှန်ကန်သောတပ်ဆင်နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ apk ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပါကသင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးနှောင်းပိုင်းတွင် Joaquin Prats ပြောသကဲ့သို့ «တစ် ဦး က jugarrrrrrrr »
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » [APK] Playerunknown ၏ Battlegrounds ကိုယခု download နှင့် install လုပ်ပါ။ (OBB method)
WhatsApp နှင့် Facebook သည်ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံခဲ့ရသည်